6 amanoveli amakhulu abhalwa ngesikhathi sokurekhoda | Izincwadi Zamanje
Lapho sicabanga ukubhala incwadi, isilinganiso sephrojekthi sisikhuthaza ukuthi sicabange ngezinsuku eziningi, izinyanga kanye neminyaka yokusebenza okuzofakwa kule nqubo. Kodwa-ke, leyo bekungeyona inkinga yabalobi balokhu Amanoveli angu-6 amakhulu abhalwa ngesikhathi sokurekhoda; imisebenzi evela ekukhuthazelweni ngokushesha kwababhali abanjengo Jack Kerouac o Graham Greene.
1 Emgwaqweni, nguJack Kerouac
2 Umfana ogqoke izingubo zokulala ezinemigqa nguJohn Boyne
3 Umdlali, nguFyodor Dostoevsky
4 A Christmas Carol, kaCharles Dickens
5 Ummeli Oyimfihlo nguGraham Greene
6 I-Clockwork Orange ngu-Anthony Burgess
Emgwaqweni, nguJack Kerouac
Original "The Scroll" lapho uJack Kerouac abhale khona Endleleni. TeSteve Rhodes.
Umsebenzi ohamba phambili we isizukulwane esishaywayo yabhalwa nguKerouac emasontweni amathathu nje vo ephepheni eyaziwa ngokuthi "El Rollo". Inoveli eyabulala umzila 66 futhi lapho umbhali aqukethe isithelo sefilosofi yokuhamba ye-jazz, izinkondlo nezidakamizwa yabhalwa ngaphandle kwamaphethelo noma izigaba efulethini lakhe laseManhattan, okokuqala ngolimi lwebele, isiFulentshi.
Umfana ogqoke izingubo zokulala ezinemigqa nguJohn Boyne
Ngokungafani namanye amanoveli akhe afana Isela Lesikhathi noma i-Mutiny kwi-Bounty, okwakudinga izinyanga zokulungiselela, umbhali wase-Ireland UJohn Boyne wabhala umsebenzi wakhe odume kakhulu, okwabangane bezingane ezimbili ngesikhathi sokuQothulwa Kwesizwe okwedume kabi, ezinsukwini ezimbili nengxenye nje kuphela. Isikhukhula sogqozi esaholela uBoyne ukuthi ahlukane netafula lakhe ukuze nje adle futhi alale.
Umdlali, nguFyodor Dostoevsky
Ngo-1866, uDostoevsky wayesewumlutha we-roulette, yingakho ahlangabezana nenkinga yezomnotho leyo ukukhulelwa okuhamba kancane kobugebengu nokujezisa akukwazanga ukusiza ngaleso sikhathi. Ngalesi sizathu, umbhali waseRussia uthathe isinqumo Lo mdlali ubhale ngezinsuku ezingama-26 kuphela njenge-semi-autobiography ukuze akhokhe izikweletu zakhe. Into ebingcono kakhulu ukuthi, ngaphezu kwalokho, wagcina eshadele lo stenographer ayemtshela indaba ka-Alekséi Ivanovich, umfundisi waseRussia womndeni ka-El General ofakwe ehhotela laseJalimane lapho i-roulette yayiyinkanyezi khona.
A Christmas Carol, kaCharles Dickens
Ishicilelwe ngo-1843, umsebenzi wokubhala omelela kahle isikhathi sikaKhisimusi esiseduze yabhalwa nguDickens emasontweni ayisithupha nje kuphela. Umsebenzi, ogqugquzelwe ubuntwana bombhali obumpofu, weza ukuvuselela amaholide kaKhisimusi abhajwe phakathi kwamasiko amadala neminikelo emisha yaseYankee njengezihlahla zikaKhisimusi. UDickens yena wabe esethatha leli thuba wagxeka ubungxiwankulu, obabufanekisela umkhosi odume kakhulu onyakeni, ngaleso sikhathi.
Ummeli Oyimfihlo nguGraham Greene
Ukuthakazelela kukaGreene zonke izinto zaseSpanishi, ngenxa yokugqugquzela inkolo yamaKatolika engandile kakhulu enyakatho yeYurophu, kwamholela faka iSpain kweminye yemisebenzi yakhe efana namaRumor kusihlwa noma, ikakhulukazi, i-The Confidential Agent. Kubhalwe emasontweni ayisithupha nje kuphela, inoveli lapho umSpain ebalekela khona eNgilandi phakathi neMpi Yombango YaseSpain ukuvala inkontileka yesigidigidi yakhulelwa ngasikhathi sinye Amandla nenkazimulo njengendlela yokwakha umsebenzi othengisa kakhulu futhi osheshayo ongondla unkosikazi wakhe nezingane zakhe ezimbili.
I-Clockwork Orange ngu-Anthony Burgess
Ngemuva kokushicilelwa kwenoveli ye-dystopi esethwe eLondon yesikhathi esizayo ngo-1962, UBurgess uvumile ukuthi wabhala i-Clockwork Orange emasontweni amathathu nje futhi efuna imali nje. Inoveli, eguqulelwe ifilimu nguStanley Kubrick ngo-1971 UBurgess akazange ayithande, ikakhulukazi imininingwane efana nokungabikho kwesahluko sokugcina sencwadi esazama ukufaka u-Alex DeLarge emphakathini noma isembatho esasikuloveli sasivele simnyama, hhayi esimhlophe.
Lezi Amanoveli ayi-6 adumile abhalwa ngesikhathi sokurekhoda Baqinisekisa ukubaluleka kokugxumela echibini futhi babhale konke okusemandleni ukuze banelise ugqozi olungasoze lwafana kusasa, noma ngosuku olulandelayo. Futhi manje kulapho ngibona ukuthi sengibhale lesi sihloko ngokungazi ukuze ngikhuthaze bonke labo abacwile ekwakheni umsebenzi omusha (futhi nami ngifaka phakathi kwabo).
Uwaphatha kanjani amanoveli akho?
Indlela ephelele ye-athikili: Izincwadi Zamanje » Literatura » Amanoveli angu-6 amakhulu abhalwa ngesikhathi sokurekhoda
UMartínez Ortigoza René kusho
Siyabonga ngalesi sikhathi esiyigugu. Emizuzwini embalwa ingqondo nenhliziyo yami ifakwa umdlandla. Isifiso sokubhala siyachichima. Yadalwa kakhulu kuyena kunalokho ongakwenza ukuze udale izincwadi.
Ngiyabonga kakhulu futhi nezibusiso.
Impendulo ivela ku- Martínez Ortigoza René:
UJack London. Ikhulu leminyaka lokufa kwakhe. Kubalulekile.